Shaqada Dubai Mall - U fiirso sida loo dalbado xirfad tafaariiqeed
Robert Half ee shirkadda ugu fiican iyo shaqaaleynta
Published by Shirkadda Dubai City at August 7, 2018
Shaqada Dubai Mall
Shaqada Dubai Mall waa mid kale meel halkaas oo dadku waxay ka shaqeyn karaan Dubia. The Xirfadda Dubai Mall. waa sida kale oo kale. Had iyo jeer imaado maalin cusub, oo leh caqabado cusub. Laga soo bilaabo wax kale ciid kaliya iyo saxaraha Dubai. Xaqiiqdi, halyeeyo cusub oo soo iibsiga ayaa kacday. Waxaana hubaal ah in mashaariicda cusubi dhab ahaantii hore u sii kacayaan. Gaar ahaan loogu talagalay dadka ku nool UAE. Mashruucan waxaa lagu magacaabaa A Sall. Muddo ka dib, qof ayaa magaciisa ku qoray Xarunta Ganacsiga Dubai Mall. Tan iyo markaas, wax badan dadka raadinaya shirkaddaan Online. Waxaa intaa dheer, xitaa iyagu mustaqbalkiisa qaybta noqo caan.
Tani waxay noqon kartaa goobtaada shaqada mustaqbalka. Waxaa intaa dheer, Meeshu waxay ku yaalliin meelaynta cajiibka ah. Sababta oo ah xaqiiqda, the ganacsi xarunta. Waxay u muuqdaan sidii kuwa meesha ugu sareysa si aad u bilowdo shaqo. Magaalada Magaalada Dubai. Meeshan waxaa ka buuxa loo shaqeeye suura gal ah. Runtiina qof cusub ayaa ku farxi doona inuu bilaabo. Gaar ahaan meelaha raaxada. Ka shaqeynta jawi sidan oo kale ah. Had iyo jeer keena sharaf badan. Gaar ahaan gudaha resumeygaaga.
Diiwaanka shaqada ee Dubai Mall waa loo baahan yahay?
Si aad u bilowdo shaqaalaysiin ahaan safar caalami ah. The fiisada nasiib daro waa looga baahan yahay shaqo Dubai Mall. Iyo u dir codsigaaga Dubai Xarunta ganacsiga waxay sameyneysaa kaliya dareen haddii aad haysato VISA diyaar. Dhanka kale, si aad u hesho codsi diyaar ah. Waa inaad hel shaqo-bixiyeyaasha. Iyo waliba waraaqaha togan ee leh ogolaanshaha shaqada. Waxaa si gaar ah u sameeyay UAE Dowlada. Marka, sida aad rabto inaad u hesho halkaas. Ilaa waqtigan xaadirka ah, waa goobo shaqo oo aad u weyn. Dhowr kun oo dukaanno iyo shirkado maxalli ah. Shaqo ka doonista Dubai Mall.
Waxay yihiin raadinta shaqaalaha iibka, iyo sidoo kale maareeyayaasha. Dhinaca taban, iyada oo inta badan la qoro ee ku yaal Dubai Mall. Aad u baahan tahay inaad ka dalbo website-ka. Habka ugu wanaagsan ee lagula xiriiri karo shirkadaha ku sugan Dubai Mall waa in laga codsado emaylkooda. Waa in la xasuustaa, in codsiyada ugu fiican. Ma kaliya marka shaqaale la qoro ama maareeye shaqaalaysiin la xuso. Taasi guud ahaan waxay ku hadlaysaa talooyinka guusha. Isku day inaad la xiriirto maareeyayaasha kheyraadka aadanaha. Meel kasta isku day in aad gaarto qof shaqaaleysiiya. Sababta oo ah waxaa jira shan iyo labaatan kun iyo shan codsadayaasha iman kara maalin walba Dubai.
Kaaliye gacan-ka-hadal ah oo ka socda Dubai Mall
Meesha ugu fudud ee lagu helo waa shaqada kaaliyaha iibka ee Dubai Mall. Isaga oo maanka ku haya, Shirkaddayada waxay sameysay xoogaa cilmi baaris ah oo loogu talagalay shaqooyinka xarunta wicitaanka ee Dubai. Iyo mid ka mid ah shaqada ugu fudud ee aad heli karto. Waxay ku dhexjirtaa waaxda adeegga macaamiisha. Mowqifkan, dhinaca kale ee biladda, waa inuu caawiyo macaamiisha ku sugan Dubai Mall. Waxaa jira Dhowr nooc oo tafaariiqle ah halkaasoo shaqo-dooneyaashu ka bilaabi karaan shaqo. Tusaale ahaan, dharka dumarka. Dukaamada isboortiga sida a Xirfadda Adidas iyo Shaqada Nike. Shirkadaha noocan ah shaqaalaynta waqtiga oo dhan. Ant isku dayaya si aad shaqo u hesho iyaga la waxay noqon doontaa fikrad caqli badan.
Kaaliyaha iibka Shaqada Dubai. Ku soo dar waxyaabo badan oo la sameeyo. Waa inaad had iyo jeer hubisaa in macaamilku ku qanacsan yahay. Waxaa intaa dheer, macaamiisha waayo-aragnimada wax iibsiga had iyo jeer waa ugu fiican fasalka. Iyo joogitaankooda xarun dukaameysiga. Gaar ahaan dukaankaaga waa mid raaxo leh sidaa darteed way soo laaban doonaan. Qodob kale waa in macaamiisha laga dhigo mid diirada saara. Sababtoo ah waxay u baahan yihiin inay soo iibsadaan waxyaabo aad fure u tahay iibka. Marka, sida lataliye kaaliyaha iibka shaqooyinka Dubai Mall. Waxaad u baahan doontaa tWaxay gacan ka geysataa abuurista iyo soo celinta ganacsiga Iibka gudaha Dubai Mall. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, ayaa iyana, lacag u sameyneysaa ganacsiga. Waxaad kula soo socodsiin doontaa tafaariiqle maamulaha ama kormeeraha.
Dubai Mall waa kan ugu weyn?
Hagaag waa Dubai Mall, midka adduunka ugu weyn?. Haa, waa hubaal inuu yahay 23 adduunka iyo ugu fiican ee UAE. Xaqiiqdi waa tafaariiqda badanaa booqashada tafaariiqda iyo madadaalada. Gaar ahaan si fiican loo yaqaan loogu talagalay dalxiis iyo dalxiis caalami ah. Xarunta ugu weyn ee wax laga iibsado ee magaalada Dubai. Dhab ahaantii soo dhoweyn in kabadan 80 milyan oo soo booqde sanad walba. Taasina waxay siineysaa meel ballaaran oo shaqo lagu shaqeeyo. Wadarta guud ee gudaha in lagu socdo waa ku dhawaad ​​lix milyan oo laba jibaaran furuqa. Dhanka kale, mashaariic cusub ayaa soo kordhaya. Tusaale ahaan, dhowr shirkadood ayaa maal gashanaya Dubai. Adoo furaya dukaanno cusub iyo goobo tafaariiq. Waa tan a liiska dhammaan dukaamada iibiya Dubai. Ilaa hadda, The Dubai Mall waxay leedahay qiyaastii malaayiin sq ft. Shirkadaha cusub ee caalamiga ah ayaa raadinaya dhul dabaq oo dheeraad ah si ay u iibsadaan ama kiraystaan.
Tusaale ahaan, dukaamada ayaa ka baaraandegta tafaariiqda 1,300. Waxaadna ku socon kartaa halkaa. Sidoo kale, waad awoodi kartaa booqo dhowr meelood oo ku yaal CV-gaaga. Dhinaca kale, qaar ka mid ah shirkadaha bixiya xitaa socodka waraysiga. Xaqiiq ahaan, haddii khibrad badan uma lihid. Makhaayadaha iyo baararka iyo sidoo kale cuntada sooman. U fidinta shaqooyinka maqaayadaha 200.
Shaqaalaha caalamiga ah ee ka shaqeeya dukaamada
Dubai Mall, dhab ahaantii, waxay bixisaa fursadaha shaqo ee ugu fiican. Shaqaalaha magaalada Dubai. Ilaa ilaa Caalamku wuxuu ka soo jeedaa Hindiya iyo Pakistan. Ku dhawaad ​​ummad kasta oo halkaas ka shaqeysa. Iyadoo tanna maskaxda lagu hayo, isku darka tafaariiqda ayaa isku darka. Siinta magaalada Dubai fursadaha ugu fiican. Madadaalada heer-caalami iyo madadaalo madadaalo leh. Marka, Shirkadda Dubai City had iyo jeer La talinta dadka ajnebiga ah si aad u hesho shaqo. Gaar ahaan shirkadaha waaweyn ee gudaha Mall. Ilaa hadda sida aan kor u dhigay kumanaan kun oo qof halkaas. Jawaab celintayada qorista ayaa ahayd mid togan. Sababta oo ah badan shaqo doonka. Si dhakhso leh ayaa loo dalacsiiyaa. Wich waa siinta saameyn aad u wanaagsan shaqaalaha mustaqbalka shirkada suurta galka ah ee gudaha suuqa Dubai.
Shaqooyinka ku jira Fashion in Dubai Mall
Meel kale oo loogu talagalay shaqaalaha waxay noqon kartaa waaxda dharka. Waxaa jira dhowr urur kuwaas oo soo bandhigaya Wadada Weyn. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan Dubai. Magaaladaasi miyaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa? Tusaale ahaan, waxaa jira fursado ballaadhan oo loogu talagalay dadka hodanka leh. Shirkadaha qiimeynta sare leh ee ka shaqeeya waaxda moodada. Ma hadda ku soo boodey Emirates. Waqtigan xaadirka ah shirkadaha waaweyn waxay ku fidinayaan xilalka Dubai Mall. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, dadka leh aqoonta farshaxanka sidoo kale agaasimayaasha ganacsiga. Tusaale ahaan khibradda maaraynta tafaariiqda. Hubaal hel wax xiiseeya. Majiraan wax isku dhacay Imaaraatka. Taasi waxay bilawday bilowga waxaa loogu yeeraa caasimada fashion ee Bariga Dhexe.
Qeyb kale oo shaqeeya waa inaad maamushaa waa dukaan qaali ah. Dhab ahaantii mid ka mid ah waa dukaamada tafaariiqda. Meelo badan oo laga heli karo ayaa ah shaqaaleysiiyay maamullo cusub. Shirkadaha dharka casriga ah ee carbeed ee cusub ayaa sidoo kale raadinaya shaqo-dooneyaal cusub. Intaa waxaa dheer, dukaamada farsamada gacanta ayaa raadinaya shaqaale gacanta ku haya. Iyo kuwa kale Shirkadaha shaqo ka jooga Dubai Mall. Waxaa jira a badankood ka fuliya magaalada Dubai. Adiguna ma tihid oo keliya shaqooyinka fashion.
Waa maxay ugu fiican Dubai Mall?
Mid ka mid ah suuqyada ugu fiican ee ugu wanaagsan suuqa. Tan iyo markii ay bilaabeen, waxaa mudan in la eego waa muuqaal furan-hawleed. Dhanka kale, Dubai Mall waxay leedahay tuulo bixiya waxyaabo badan oo la yaab leh. Tusaale ahaan, mid ka mid ah uruurinta caanka ah ee usbuuc dhammaadka magacyada loo yaqaan 'denim brands'. Waxaa intaa dheer, shirkaduhu waxay kuu keeni karaan jaaliyad dibadda ah. Meeshaad ku dareemi doontid lugaynta lugeedka-geed-socodka. Dhanka kale, waxaa ku yaal kafateeriyaal iyo maqaayado. Diyaar u ah inaad u qaadato macaamiil dhowr ah. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, ayaa shaqooyinka ka jira Dubai Mall seams ay suurtagal tahay. Tan iyo mashaariicda cusub ee la ballaariyey ayaa kor u kacay. Wadada moodada waxay siineysaa horumar weyn oo sharaf leh Dubai City. Ikhtiyaariyada dukaamaysiga joogtada ahi waa u furay martida.
Shirkadda Dubai City ayaa hubisay Xirfadda waa suuragal. Tusaale ahaan wax kabadan 150 adeegsi qaali ah oo cusub. Suurtagalnimada in shaqo laga helo suuqa weyn ee Dubai ayaa kordha bil kasta. Waxaa intaa dheer, waxaad ku bilaabi kartaa shaqaale ahaan oo leh mid ka mid ah maqaayadaha khibradaha cuntada. Dhamaan suuqyada Dubai, waxaad ka heli kartaa, dhowr shaqo oo wanaagsan ayaa bixiya. Tusaalooyinka mid ka mid ah waa dukaamada calanka lagu iibiyo. Iyo fikradaha cusub ee dukaamada moodada ayaa sii kordhaya. Sababtoo ah bulshada iyo dhaqaalaha Imaaraadka Carabta. Dubai ayaa u noqotay bariga dhexe ee ugu wanaagsan ee laga dukaameysto.
Dubai Mall soo jiidashada
Suuqa Dubai wuxuu ku yaal meel wanaagsan. Waxaa intaa dheer, taasi waa wuxuu soo bandhigayaa Aquarium-ka adduunka ugu caansan ee Dubai & Xayawaanka biyaha hoostooda mara. Iyo xaqiiqda ah carruurtu way jecel yihiin. Sidoo kale, meeshani waa midda ugu wanaagsan waqtiga qoyska. Mall-ka oo ay ku jiraan kumanaan xayawaan biyood ah. Intaa waxaa dheer, waxaa jira xero-cabbir 270-socod lug ah. Dhanka kale, Meeshan cajiibka ah waxay leedahay soo jiidasho badan. Mid ka mid ah tusaalooyinka Bariga Dhexe, VR Park.
Magaca buuxa haddii ay tahay soo jiidashada dhabta ah ee dhabta ah ee dhabta ah. Halkee kids dareemi kartaa nolosha 'dinosaurs' nolosha. Sida ugu dhow ee ay tahay inay u arkaan Dhinaca kale ee Dubay suuq Waxay ka kooban tahay qaybaha qoyska oo dhameystiran. Tusaale ahaan, waxaan ku darnaa KidZania. Waxaa jira dhowr hal abuur leh garoon lagu ciyaaro carruurta iyo fikradda. Dhanka kale, meleplex Reel Cinemas sidoo kale wuxuu siinayaa asal cajiib ah.
Sidoo kale tartanka Olympic Ice Cink ee Olympic-da. Meesha dibedda ay tahay mid diiran oo kulul. Gudaha suuqyadu waa qaboojin. Kuwa booqanaya ee UAE iyo martida caalamiga ah. Xarumaha Dubai waa hudheelada 5-Hotel. Halkee xitaa shaqo ku jirta Dubai Mall ayaa laga heli karaa.
Ma u qalantaa inay ka shaqeyso Dubai Mall?
Gabagabeynta hawlaha EMAAR Dubai Mall
Dabcan, waa xirfad shaqo oo ku taal Dubai Mall. Bixinta fursado badan. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waa inaad xaqiiqdii, fiiri sida loo dalbado. Gaar ahaan jumlada tafaariiqda ugufiican. Iyo aqoontaada. Shaqooyinka Dubai Mall, ma ahan wax fudud in la helo. Ilaa hada Shirkadda EMAAR, waxay shaqaaleysiisaa. Iyadoo tanna maskaxda lagu hayo, xarun cusub oo dukaameysan oo jirta. Waad awoodaa Shaqo ka hesho Dubai City. Shaqeynaya ee shirkadaha ugu sarreeya sida EMAAR. Waxay noqon doontaa dhaqdhaqaaqa ugu wanaagsan. Xirfadaada shaqsiyeed. Guud ahaan hadalada, fadlan fiiri Shirkadda Dubai City.
Shirkadan waxay leedahay a ballaarin ballaaran oo laga sameeyay Imaaraatka. Iyada oo taas maskaxda lagu hayo, ayaa ah Imaaraadka Carabta Emirates. Kordhinta dhowr mashruuc oo leh Waraysiyada socodka. Xaqiiqdii waa Dubai Mall hadda waa socota si loo kordhiyo ballaarinta magaalada Dubai. Waqtigan xaadirka ah shirkad raadineysa hab aad ku soo dhaweynayso dad badan. Tusaale ahaan, in ka badan 100 million visitors soo socota sanadaha soo socda.
Waxaa intaa dheer mashruuc dheeraad ah oo horumarineed. Xaqiiqdii kor u qaadida suuqyada tafaariiqda cusub ee tareenka. Iyo kharash badan oo dheeri ah ayaa sameyn doona codso boos cusub. Marka, dad aad u tiro badan, ayaa qabsada qaab nololeedkooda iyo soo bandhigahooda madaddaalada. Hoos ka eeg oo dalbo tafaariiqda ugu wanaagsan ka banaan Imaaraadka Carabta.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa wax wanaagsan hagayaal waayo, Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hada ka heli kartaa hagis, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.